नि: शुल्कमा WordPress को साथ अनलाइन कोर्सहरू कसरी सिर्जना गर्ने र बिक्री गर्ने? — HostingSewa Blog
जब प्रिन्टिंग प्रेस जोहानेस गुटेनबर्गले आविष्कार गरे, यसले ठूलो परिवर्तन ल्यायो।
जनतालाई शिक्षा वितरण गरियो। लियोनार्डो दा भिन्सी जस्ता लोकप्रिय रेनेसान्स कलाकारहरू पुस्तकहरूबाट सिके र नयाँ पुस्ताहरू लेखे जसले आउँदो पुस्तालाई आफ्नो ज्ञान बाँड्थे।
ती दिनहरूमा, यसले लेखकहरूको लागि भुक्तान स्रोतको रूपमा काम गर्‍यो।
आज, इन्टरनेट प्रिन्टिंग प्रेसको रूपमा काम गर्दछ र हामी नयाँ द्रुत गतिमा नयाँ सामग्री उत्पन्न गर्दछौं। नवजागरणमा जस्तै, धेरै व्यक्तिहरूले अनौपचारिक शिक्षा बाहेक नयाँ सीपहरू अनलाइन सिक्न पाउँछन्।
आज, जसले ती अनलाइन कोर्सहरू सिर्जना र बेच्नेहरूको लागि भुक्तान स्रोतको रूपमा काम गर्दछ।
तपाईं सिर्जना गर्न र एक अनलाइन कोर्स बेच्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईं केहि मा राम्रो हुनुहुन्छ। यस गाईडमा तपाई वर्डप्रेसको सहयोगमा नि: शुल्क अनलाईन कोर्स सेटअप गर्न र तपाईको ब्लगबाट लाभदायक आय प्रवाह सिर्जना गर्न सिक्नुहुनेछ।
प्याट फ्लाइन र यारो स्टारक जस्ता ब्लगर्सले आफ्नो ब्लगबाट अनलाइन पाठ्यक्रमहरू बेचेर सयौं हजारौं डलर कमाउन सफल भएका छन्। यदि तपाईंलाई थाहा छ वा कुनै विशेष शीर्षकमा अनुभव छ भने, तपाईं आफ्नो ज्ञान साझा गर्न कोर्स सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जबकि तपाईंको ब्लगलाई निष्क्रिय आय स्रोतमा बदल्नुहोस्।
यद्यपि यो एक जटिल प्रक्रिया जस्तो लाग्न सक्छ, यो धेरै सजिलो छ र WordPress को साथ एक अनलाइन कोर्स सेट अप गर्न स्वतन्त्र छ।
यसलाई कसरी गर्ने जाँच गर्नुहोस्।
WordPress प्रयोग गर्नका कारणहरू
सर्वश्रेष्ठ नि: शुल्क वर्डप्रेस LMS प्लगइनहरू
एक प्रभावी अनलाइन कोर्स को मुख्य तत्वहरू के हुन्?
सिक्नुहोस् प्रेस स्थापना गर्नका लागि चरणहरू
LearnPress कन्फिगर गर्न चरणहरू?
सिक्नुहोस् प्रेसको साथ पाठ्यक्रम सिर्जना गर्न चरणहरू
कसरी तपाइँको पाठ्यक्रम को मूल्य?
कोर्स मार्केटि। र ​​पदोन्नति
सामान्यतया, LMS (लर्नि Management व्यवस्थापन प्रणाली) जस्ता एक अनलाइन प्लेटफर्मले तपाइँको पाठ्यक्रमहरू सिर्जना गर्न र बेच्नका साथै तपाईंको विद्यार्थीहरूको प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्दछ। जे होस्, तपाईले यी प्लेटफर्महरूको लागि मासिक सदस्यता र प्लेटफर्म शुल्कहरू सहित धेरै भुक्तान गर्न आवश्यक छ।
वर्डप्रेस प्रयोग गर्दा, तपाईले मासिक सदस्यता शुल्क र प्लेटफर्म शुल्क तिर्न आवश्यक पर्दैन आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई कुनै समस्या बिना नै सहज अनलाइन शिक्षा अनुभव प्रस्ताव गर्न।
तपाईंले धेरै उत्कृष्ट WordPress LMS प्लगइनहरू भेट्टाउनुहुनेछ जुन यस काम पूरा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईं प्रिमियम प्लगइनको साथ उन्नत सुविधाहरू प्राप्त र एक समय मूल्यहरु मा आउँछ। त्यहाँ केहि निःशुल्क प्लगइनहरू उपलब्ध छन् यदि तपाईं प्रीमियम प्लगइनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न भने।
तपाइँ WordPress मा सीमित नि: शुल्क LMS प्लगइनहरू फेला पार्नुहुनेछ। तर, ती मध्ये धेरै या त पुरानो हो वा खराब सुविधाहरूको साथ आयो। निश्चित रूपमा, यी क्षणहरूमा उत्तम उत्तम विकल्पहरू उपलब्ध छन्।
सबै भन्दा लोकप्रिय, नि: शुल्क र स्थिर प्लगइन, लर्निप्रेस एक मात्र प्लगइन हो जुन नियमित रूपमा अद्यावधिक हुन्छ। यसले तपाईंलाई सुन्दर डिजाइन प्रदान गर्दछ र यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई विषयवस्तुहरू प्रयोग गर्न तपाईंको पाठ्यक्रमहरूको डिजाईन अनुकूलित गर्न तपाईंको विद्यार्थीहरूलाई उत्तम अनुभव प्रदान गर्न अनुमति दिन्छ।
तपाईं PayPal एकीकरणको साथ भिडियो, पाठ, र क्विज आधारित पाठ्यक्रमहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यसले भुक्तानी गेटवेहरू पनि प्रदान गर्दछ जस्तै स्ट्रिप र २ चेकआउट एड-अनहरूको साथ।
नयाँ वर्डप्रेस LMS प्लगइन, LifterLMS मा एक आधुनिक डिजाइन र एक अनुकूलन अनलाइन शिक्षा प्लेटफर्म सिर्जना गर्न धेरै अनुकूलन विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दछ।
तपाईं यसको कार्यहरू प्रीमियम एड्-अनहरूको साथ विस्तार गर्ने क्षमता पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ।
मास्टरस्टुडी एलएमएस, अर्को महान निःशुल्क प्लगइन, तपाइँलाई वर्डप्रेसमा एक लर्निंग व्यवस्थापन प्रणाली सेटअप गर्न अनुमति दिन्छ। यस प्लगइनको साथ तपाईं पाठ, भिडियो, र स्लाइड शो आधारित शिक्षा कार्यक्रमहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ। यसले भुक्तानी स्वीकार गर्नको लागि PayPal र Stripe सँग एकीकरण पनि प्रस्ताव गर्दछ।
सिकाई व्यवस्थापन प्रणालीको सेट अप सुरू गर्नु अघि, यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंसँग आफ्नो अनलाइन कोर्सको लागि पूर्ण तयारी सामग्री योजना छ।
एक अनलाइन कोर्स र ब्लग पोष्ट सिर्जना गर्न पूर्ण भिन्न छन्। जब तपाईं आफ्नो अनलाइन पाठ्यक्रमहरूसँग सुरू गर्न चाहानुहुन्छ भने यसको सावधानीपूर्वक योजना गर्नु आवश्यक छ सही सामग्री, असाइनमेन्टहरू, र बगिरहेको पाठ जुन एक अर्कासँग जोडिन्छ।
तपाईका विद्यार्थीहरूले समयको रूपमा तपाईंको अनलाइन कोर्सको बारेमा ठीक अध्ययन गर्नेछन्। यसको मतलब तपाईले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाईको पाठ्यक्रममा प्रत्येक पाठ जानकारीमूलक र रमाईलो सामग्री समावेश गर्दछ ताकि विद्यार्थीहरू पाठ्यक्रम भर व्यस्त रहन।
उदाहरण को लागी, यदि तपाईं केहि अनलाइन सिक्दै हुनुहुन्छ र भिडियोले तपाईंलाई एक इशारा बिना बोलेको एक जना व्यक्ति देखाउँदैछ, तपाईं यसलाई हेर्न रुचि राख्नु हुन्न।
एक उत्कृष्ट अनलाइन कोर्सले मल्टिमेडिया सामग्री समावेश गर्दछ:
भिडियो पाठ (तपाईं पाठमा YouTube भिडियोहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ)
स्लाइडशोहरू (तपाई पाठमा स्लाइड सेयर स्लाइडहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ)
डाउनलोड गर्न सकिने सामग्री (रिपोर्टहरू, PDF, केस स्टडीहरू, आदि)।
असाइनमेन्टहरू र अन्तिम परीक्षणहरू।
लर्न्प्रेसप्रेस वर्डप्रेसमा लर्निंग म्यानेजमेन्ट सिस्टम सेटअप गर्न प्रयोग हुनेछ। यसले शुरुआती-मैत्री ईन्टरफेस प्रदान गर्दछ र तपाइँ यसलाई सजिलैसँग सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ।
लर्निप्रेस स्थापना गर्नका लागि तपाईको WordPress प्रशासक ड्यासबोर्डमा लगइन गर्नुहोस् र जानुहोस् नयाँ थप्नुहोस् प्लगइन पृष्ठ।
खोजी बारमा लर्नप्रेसका लागि खोजी गर्नुहोस् र क्लिक गर्नुहोस् स्थापना गर्नुहोस् र सक्रिय गर्नुहोस् प्लगइन सक्षम गर्न।
नोट: यद्यपि यो तपाइँको लागि आवश्यक छैन, नयाँ LMS प्लगइनमा नयाँ LMS प्लगइन स्थापना गर्न सिफारिस गरिन्छ। यसले तपाइँलाई तपाइँको पाठ्यक्रमहरू, विद्यार्थीहरू, र बिक्री ब्लग र पाठ्यक्रम प्लेटफर्म अलग राख्नको साथ मद्दत गर्दछ।
धेरै जसो WordPress होस्टिंग प्रदायकहरूले सस्तो योजनाहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईंलाई समान सर्भरमा बहु वेबसाइटहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। केवल एक सबडोमेन नाम (उदाहरण: school.yourname.com) प्रयोग गर्नुहोस् र नयाँ स्थापनामा सेटअप गर्नुहोस्।
एकचोटि तपाईंले स्थापना गर्नुभयो र सिक्नुहोस् प्रेस सक्रिय गर्नुभयो, यो तपाईंलाई यसको सेटअप विजार्डको साथ प्रारम्भिक सेटअप प्रक्रिया मार्फत मार्गदर्शन गर्दछ।
प्लगइनको यस सुविधाको कारण पूर्ण प्रक्रिया शुरुआतीहरूको लागि सरल हुन्छ।
सेटअप विजार्डको साथ तपाई आफ्ना पाठ्यक्रमहरू, प्रोफाइल, र चेकआउट पृष्ठहरूमा स्थिर पृष्ठहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंको मुद्रा कन्फिगर गर्नुहोस्, भुक्तानी स्वीकार गर्न तपाईंको पेपल सेटअप गर्नुहोस् र विद्यार्थी र शिक्षकहरूको लागि ईमेल सूचनाहरू सक्षम गर्नुहोस्।
जब सेटअप विजार्ड समाप्त हुन्छ, तपाईंलाई या त एउटा नमूना कोर्स स्थापना गर्न वा नयाँ सिर्जना गर्न प्रेरित गरिनेछ। लर्नप्रेस प्रेस कोर्सको उपस्थिति जाँच गर्नका लागि नमूना पाठ्यक्रम स्थापना गर्नुहोस् जुन यस प्लगइनसँग पाठ्यक्रम सामग्री सिर्जना गरिएको छ जाँच गर्नका लागि।
नयाँ पाठ्यक्रम सिर्जना गर्न, सिक्नुहोस् प्रेस प्लगइन पृष्ठमा जानुहोस् र वर्डप्रेस प्रशासन ड्यासबोर्ड साइडबारको लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्।
यसमा नेभिगेट गर्नुहोस् पाठ्यक्रमहरू ट्याब र क्लिक गर्नुहोस् नयाँ थप्नुहोस्। तपाईको पाठ्यक्रमको शीर्षक र विवरण दिनुहोस्।
अब, तपाईले पाठ्यक्रम कन्फिगर गर्न सक्नुहुन्छ। यसले पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम वर्णन, पाठ्यक्रम निर्धारण, मूल्य निर्धारण, र मूल्य निर्धारण समावेश गर्दछ। क्लिक गरेर परिवर्तनहरू बचत गर्नुहोस् प्रकाशित गर्नुहोस्।
तपाईंले सिर्जना गर्न आवश्यक छ पाठ तपाईको पाठ्यक्रम को छुट्टै। मा जानुहोस् पाठ सिक्नुहोस् प्रेसको ट्याब र क्लिक गर्नुहोस् नयाँ थप्नुहोस् पाठ सिर्जना गर्न।
यदि तपाईले पहिले नै तपाईको सबै पाठहरु परिभाषित गर्नुभयो कोर्स पाठ्यक्रम, त्यसपछि तपाईं यी पृष्ठहरू यस पृष्ठमा पहिले नै उपलब्ध देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईलाई आफ्नो सामग्री थप्नका लागि केवल सम्पादन गर्न आवश्यक पर्दछ।
तपाइँ तपाइँको पाठ्यक्रम को लागी पाठ असाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ पाठ्यक्रममा नयाँ पाठ प्रदान गर्न चाहानुहुन्छ भने, फिर्ता जानुहोस् पाठ्यक्रमहरू ट्याब गर्नुहोस् र पाठ्यक्रम पाठ्यक्रममा म्यानुअल्ली नयाँ पाठ थप्न कोर्स सम्पादन गर्नुहोस्।
यो सिर्जना गर्न र सामेल गर्न पनि सम्भव छ क्विजहरू तपाईको पाठ्यक्रममा। यसका लागि, बाट क्विज सिर्जना गर्नुहोस् क्विजहरू ट्याब पहिले र त्यसपछि बाट प्रश्नहरू ट्याबले प्रश्नहरू व्यक्तिगत रूपमा सिर्जना गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई सही क्विजमा नियुक्त गर्नुहोस्। त्यसो भए तपाईले पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रममा क्विज नै प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।
अन्तिम पाठ्यक्रम पृष्ठ तल देखिने छ:
नोट: तपाइँ तपाइँको पाठ्यक्रम पृष्ठ डिजाइन अधिक आकर्षक बनाउन को लागी एक प्रीमियम विषयवस्तु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
यस पृष्ठबाट विद्यार्थीहरूले पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम ब्राउज गर्न सक्दछन्, प्रत्येक सेक्सनमा पाठहरू पूर्वावलोकन गर्न सक्दछन्, र अवतरण पृष्ठबाट सीधा पाठ्यक्रममा नामांकन गर्न सक्छन्।
लर्निंग प्रेसको साथ तपाई आफ्नो LMS मा अधिक प्रकार्यहरू थप्नको लागि धेरै प्रीमियम एड-अनहरू पनि प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसमा विभिन्न प्रकारका पाठ्यक्रम सामग्री प्रकारहरू, प्रकार्यहरू, क्रेडिट कार्ड भुक्तानहरू स्वीकार्नका लागि २ चेकआउटको साथ एकीकरण, WooCommerce सँग एकीकरण, र यस्तै।
तपाईंले आफ्नो पाठ्यक्रम सार्वजनिक गर्न र राजस्व उत्पन्न गर्न सुरु गर्नु भन्दा पहिले, तपाईं सोच्नुहोला कि कोर्सको लागि कति चार्ज गर्ने?
यसमा सोच्न तपाईंले समय लिनु पर्छ किनकि यदि तपाईंले अनलाइन कोर्स गलत मूल्यमा बेच्नुभयो भने यसले राजस्व गुमाउन सक्दछ। यदि तपाइँ महँगो दरमा बेच्नुहुन्छ भने, व्यक्तिहरूले किन्दैनन्। यदि तपाईं कम मूल्यमा बेच्नुहुन्छ भने तपाईं टेबलमा पैसा छोड्नुहुनेछ।
यसबाहेक, पाठ्यक्रमको मूल्यले तपाईंको अनलाइन कोर्स व्यवसायको लगभग सबै पक्षमा सीधा असर पार्नेछ – मार्केटिंगबाट तपाईले लक्षित विद्यार्थीहरूको प्रकारसम्म, तपाइँ आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई सहयोग र ध्यान दिनुहुन्छ।
सम्झनुहोस् कि यो एक-फिट-सबै फिट हुँदैन तर त्यहाँ केही दिशानिर्देशहरू छन् जुन तपाईंलाई तपाईंको अनौंठो मूल्य पोइन्ट तय गर्न अनुसरण गर्न आवश्यक पर्दछ।
एक व्यवसाय मोडेल चयन गर्नुहोस्
व्यापार मोडेल चयन गरेर सुरू गर्नुहोस्। यसलाई दुई व्यापक कोटीहरूमा विभाजन गरिएको छ – एक पटक वा पुनरावर्ती (जसलाई सदस्यता मोडेल पनि भनिन्छ)।
एक-समयको मोडेलमा, विद्यार्थीहरूले तपाइँको अनलाईन कोर्स पहुँच गर्नका लागि तपाइँलाई अग्रिम वा किस्तमा भुक्तानी गर्नेछन्। एक पटक भुक्तान पूरा भएपछि, तिनीहरूको तपाईंको पाठ्यक्रममा असीमित पहुँच हुनेछ।
सदस्यता मोडेलमा, विद्यार्थीहरूले तपाईंलाई नियमित आधारमा भुक्तानी गर्नेछन्, सामान्यतया मासिक आधारमा। यो मोडेल राम्रो छ यदि तपाईंसँग सँधै नयाँ कोर्स छ भने प्रत्येक महिना। यदि उनीहरूको सदस्यता रद्द गरियो भने, तिनीहरूले तपाईंको कार्यक्रम पहुँच गर्न सक्षम हुनेछन्।
एउटा हाइब्रिड बनाउनका लागि दुई मोडेलको संयोजन प्रस्ताव गर्न सकिन्छ जहाँ विद्यार्थीले कोर अनलाइन कोर्सको लागि एकमुष्ठ रकम तिर्ने छ र त्यसपछि चलिरहेको कोचिंग वा सल्लाह दिने सदस्यतामा सामेल हुन सक्छ।
मोडल पत्ता लगाउन जुन तपाईंको लागि काम गर्दछ, निश्चित गर्नुहोस् कि यदि तपाईं प्रत्येक महिना नयाँ सामग्री तयार गर्दै हुनुहुन्छ, वा यदि तपाईंको पाठ्यक्रम एकैचोटि पूरा गर्न सकिन्छ भने। यदि यो पहिलो हो भने, सदस्यता मोडेल प्रयोग गर्नुहोस्। यदि यो दोस्रो हो भने, एक-समय मोडेल प्रयोग गर्नुहोस्।
तपाईं ब्ल्गर, लेखक, YouTuber, वा राम्रो श्रोताको आधारका साथ कोही हुन सक्नुहुन्छ र तपाईंको अनलाइन कोर्सको साथ त्यो दर्शकलाई मोनेटाइज गर्न सोच्दै हुनुहुन्छ। यसले यहाँ ठूलो फाइदा प्रस्तुत गर्दछ किनकि तपाईको अनलाइन पाठ्यक्रमलाई तपाईको ईमेल सूचीमा प्रमोट गर्न र बिक्री तुरुन्तै बिक्री गर्न सम्भव छ, तपाईले प्रकाशित मारा
तर, यदि तपाइँ सिधै तपाइँको पाठ्यक्रमको साथ शुरू गर्नुभयो भने, तपाइँले तपाइँको अनलाइन पाठ्यक्रमलाई निरन्तर बढावा दिन आवश्यक छ र यसले जीवन परिवर्तन गर्ने आय आर्जन गर्न महिनौं लिन सक्दछ।
कुनै पनि परिस्थितिमा, तपाईंलाई वास्तवमै मार्केटिंग रणनीतिहरूमा डुब्नु भन्दा पहिले तपाईंलाई बिक्री फनेल चाहिन्छ। एक मार्केटिंग रणनीति तपाइँको अनलाइन कोर्स प्रवर्धन गर्न एक विधि हो। जब तपाईं फेसबुकमा विज्ञापनहरू चलाउनुहुन्छ, यो एक मार्केटिंग युक्ति हो।
जबकि, बिक्री फनेल पूर्ण प्रक्रिया हो जुन तपाइँले तपाइँको सम्भावित विद्यार्थीहरूलाई मार्फत मद्दत गर्नुहुन्छ, र त्यो तपाइँको पाठ्यक्रममा भर्ना (वा भर्ना नगर्ने) निर्णय लिँदा उनीहरूको अन्त्य हुन्छ।
तपाईले पाठ्यक्रम सिर्जना गरेपछि तपाईले पाठ्यक्रम बढावा र बिक्री गर्न सक्नुहुनेछ। तर, तपाईंले बिक्री सुरु गर्नु अघि, एक सिक्नुहोस् प्रेस कम्प्याटिवल WordPress विषयवस्तु चयन गर्नुहोस्।
लन्डि pages पृष्ठहरू र पाठ्यक्रमहरूका पाठ्यक्रमहरू पाठ्यक्रमका लागि अनुकूलित डिजाइन गरिएको शिक्षा वर्डप्रेस थीम प्रयोग गर्ने बखत धेरै पेशेवर र सुन्दर देखिन्छ।
र अन्त्यमा, याद राख्नुहोस् कि मानिसहरूले तपाईंको कोर्स खरीद गर्न तपाईंको वेबसाइट फेला पार्दैनन्। तपाईंले आफ्नो कोर्सको पदोन्नतीमा काम गर्न आवश्यक छ र ट्राफिकलाई तपाईंको पाठ्यक्रम अवतरण पृष्ठमा आकर्षित गर्न आवश्यक छ।
तपाइँको ईमेल सूची को उपयोग गरी अनलाइन कोर्स प्रमोट गर्नुहोस्।
तपाइँको को आला मा अन्य ब्लॉगरहरु संग कनेक्ट को पाठ्यक्रम को प्रमोशन को लागी एक अतिथि ब्लगिंग अभियान चलाउन सुनिश्चित गर्नुहोस्।
पोडकास्ट अन्तर्वार्ताको लागि जानुहोस्।
YouTube मा भिडियोहरू सिर्जना गर्नुहोस्।
फेसबुकमा विज्ञापन अभियान चलाउनुहोस्।
आज, त्यहाँ व्यक्तिहरू छन् जुन तपाईंले सिकाउनुभएको शीर्षक सिकेर फाइदा लिन सक्दछन्। जहाँसम्म पहिले नै समान विषय मा अन्य अनलाइन कोर्सहरू हुन सक्छ, तर तपाईंको अद्वितीय परिप्रेक्ष्य तपाईं लोकप्रिय बनाउँछ।
तपाईं सजिलैसँग एक अनलाइन कोर्स सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको अनलाइन शिक्षा प्रणाली सेट अप गर्नुहोस्। चुनौतीपूर्ण अंश कोर्सको प्रचार र विद्यार्थीहरू लाई हासिल गर्नु हो।
जहाँसम्म, अधिकतम व्यवसायको साथ तपाईले नाफा कमाउन कडा परिश्रम गर्नु पर्छ। नि: शुल्क सफ्टवेयरको कारण, बाँकी रकम विज्ञापन अभियान वा अतिथि ब्ल्गिंग अभियानहरूमा खर्च गर्न सकिन्छ तपाईंको पाठ्यक्रममा विद्यार्थी भर्नाका लागि द्रुत परिणामहरू प्राप्त गर्नका लागि।
<< How to Edit the Profile in WordPress? कसरी साइटप्याड प्रयोग गरी वेबसाइट क्लोन गर्ने? >>